Kolombia dia firenena mifanohitra tsara, izay misy ny trano fialofana miaraka amin'ireo tahirin -tseranana goavana, ary tsy lavitra ny tanàn-dehibe dia misy valan-javaboarim-pirenena mahatalanjona. Ankoatra ny renirano mahavariana, Columbia dia manankarena sy farihy, izay tsy maintsy ankafizina, ka nanao fialantsasatra tany amin'io firenena mahaliana indrindra io.
Ireo farihy malaza ao Kolombia
Ny malaza indrindra ao amin'ny firenena dia ireo vondron'antoko izay manintona mpizahatany na amin'ny fomba mahavariana, na amin'ny tantara mahaliana, na ny roa, miaraka amin'ny:
Lake Guatavita . Miorina 50 km avaratra atsinanan'i Bogotá any amin'ireo tendrombohitra ao Cundinamarca. Ny farihy dia eo amin'ny 3100 m ambonin'ny haabon'ny ranomasina amin'ny volkano volkano maty, ary noho izany dia manana endrika mifanaraka tsara. Ny velaran'ilay dobo dia 1,6 km eo ho eo. Inoana fa nisy ireo Indianina nanolotra fanatitra masina ho an'ireo andriamanitra teo aloha: nandroaka zavatra volamena izy ireo tany amin'ny faritry ny farihy. Io fomba amam-panao io, ankoatra izany, dia nahitam-pahalalana momba ny tanàna volamena an'I Eldorado koa teo amin'ireo conquistadors.
Lake Thoth. Io no lehibe indrindra any Kolombia, miorina eo afovoan'ny farihy. Ny velarantanin'ilay tanàna dia 562 metatra. km. Ny halavany lehibe indrindra dia 67 m, ary ny toeram-ponenana dia miorina amin'ny havoakan'ny 3015 m ambonin'ny haabon'ny ranomasina. Thoth dia azo hivezivezena ary faharoa avo indrindra any Amerika Atsimo, faharoa amin'ny Lake Titicaca . Ny faritra akaiky indrindra dia Aquitaine, Tota ary Quito. Mora mankany amin'ny farihy izy ireo, ary ireo tanàna ireo no mora indrindra mankany Bogota.
Lake Iguacu. Ao amin'ny valan-tseraseran'ny firenena izy io , izay voalaza fa faritra voaaro tamin'ny taona 1977. Misy farihy iray eo avaratra andrefan'ny tanànan'i Villa de Leyva . Angano fahiny momba ny fahaterahan'ny olombelona no mifandray amin'io farihy io. Araka ny finoan'ny vahoaka indizena - muiskov, avy amin'ny Iguaques ny olombelona, ​​raha nivoaka avy tao anaty rano ny andriamanibavy Bachue ary nisy zazalahy kely teny an-tsandriny. Rehefa nihalehibe ilay zazalahy, dia efa nisy mponina eran-tany. Ary ny andriamani-tsi-izy sy ny zanany dia niverina ho any amin'ny farihy am-bavahady, fa efa nasandratra kosa ny bibilava.
Ny fitahirizana an'i Kalima. Iray amin'ireo farihy voajanahary lehibe indrindra ao amin'ny firenena io. Toerana iray any amin'ny faritra andrefan'i Kolombia, 80 km miala ny Oseana Pasifika. Ny halavany dia 13 km, ary ny sakany lehibe dia 2,5 km. Hatramin'ny 1966 (aorian'ny fahavitan'ny asa fanorenana), dia nanomboka nanintona mpizaha tany io toerana io, satria nanokatra fomba fijery mahafinaritra ilay fitahirizana. Ny fisian'ny rivotra tsy tapaka dia nanjary tsara ho an'ireo mpihira izay afaka hihaona eto amin'ny fotoana rehetra. Ny haavon'ny rano dia mihodina manodidina ny marika amin'ny +19 ° C mandritra ny taona.
Farihin'i Santa Isabel. Mipetraka ao amin'ny National Park Los Nevados , izay miorina ao amin'ny departemantan'i Risaralda. Ity farihy ity dia manana fiaviana hafakely ary feno ranomandry avy eny amin'ny tendron'ilay volkano Nevado. Noho izany fomba famenoana izany, ny rano ao amin'ny farihy dia marefo foana. Misy fomba fijery mahafinaritra ny tendrombohitra. Tsara koa ny manamarika fa hita ao amin'ny ranon'i Santa Isabel, ny trondro ny avana dia trondro iray lehibe sy mahafinaritra.
Laguna Verde. Eo amin'ny ilany andrefan'ny volokano azufral izy io. Ny haavon'ny rano ao amin'ny farihy dia mihodina manodidina ny 50 ° C - ao amin'ny loharano mafana ao Laguna Verde, ny mari-pahaizany dia ny +54 ° C. Tonga any amin'io farihy io ny mpizaha-tany satria heverina ho mandaitra ny rano. Ankoatra izany, ny moron-dranomasina dia manana lova fahiny, izay maherin'ny arivo taona, satria ny fipoahan'ny volokano farany dia nitranga tamin'ny 930.
Lagoon of Kocha. Ity farihy ity dia hatsaran-tarehy mahatalanjona, any akaikin'ny tanànan'i Pasto. Eo afovoan'ny farihy dia nosy kely La Corot. Ary eto amin'ny nosy, ary manodidina ny Lagoon Kocha dia be dia be ny ahitra, misy tora-pasika mahafinaritra eto . Ankoatra izany, ny mpanjono manjono dia afaka manamboatra ny trondro mpanjono, izay hita any anaty farihy be.
Shia Labaf dia tafiditra amin'ny tantara ratsy iray ara-politika!
Ny fampiasana pineapple ho an'ny fahavoazana sy ny fahasalaman'ny vehivavy
Mandeha amin'ny orona ho an'ny ankizy Siallor - fampianarana
Salmon miaraka amin'ny ovy
Style tsy mahazatra ho an'ny zazavavy
Ny akanjo hoditra Alef - lamaody lamaody
Pills for sunburn
Karazana botry mahafinaritra
Tavoahangy tavoahangy tery
Fandroahana rickets amin'ny ankizy
Amin'ny inona no tokony hitadiavana tennis?
Ahoana no fomba fanaovana piozila amin'ny tananao?
Erasivan'ny haza - soritr'aretina
Ny biôsezia amin'ny tiroida